IXiaomi luphawu olukhula kakhulu kwintengiso yentloko | I-Androidsis
I-Xiaomi yeyona nto ikhula ngokukhawuleza kwicandelo lee-headphone
Intsimi yeefowuni eziphathwayo ziqhubeka nokukhula ngokukhawuleza. I-Apple yeyona nto ithengiswa kakhulu kweli candelo, enkosi ngokuthandwa kwee-AirPods zayo, kodwa ezinye iimveliso zikhula kakhulu. Ngokukodwa uXiaomi uhambela phambili ngesantya esikhulu Kweli candelo lentengiso, esele likwindawo yesithathu, emva kweApple kunye ne Samsung.
Uphawu lwaseTshayina lunoluhlu olubanzi lwee-headphone, phakathi kwazo sifumana ii-AirDots, Sele sithethile nawe ngaphambili. Ukongeza, iXiaomi iyaqhubeka nokusebenza kwiimodeli ezintsha, ezinceda ukuthengisa kwayo kuqhubeke ukwanda ngokuhamba kwexesha.
Ukukhula okufunyanwa nguXiaomi kwisithuba sonyaka kuyamangalisa. Ukusukela kwikota yesibini yalo nyaka ukuthengiswa kwayo kweefowuni ngentloko kufikelela kwiiyunithi ezizizigidi eziyi-2.1, isabelo sentengiso se-6,5% kule meko. Imele ukukhula okuphawulekayo kwe-714,8% xa kuthelekiswa nexesha elifanayo kwakuloo nyaka.
Ngale ndlela, inkampani kathathu amanani okukhula kwabo bakhuphisana nabo iApple kunye neSamsung. Eyona nto ngokungathandabuzekiyo iyenza icace into yokuba uphawu lunokuba lolona luthandwayo kweli candelo lentengiso. Okwangoku sele belesithathu, kodwa ngekhe kumangalise ukuba benyukele kwindawo yesibini.
Kuya kuba ngumdla ukubona indlela intengiso eqhubeka ngayo kule ndawo, Ukubona ukongamela kweApple kwii-AirPods zayo, nangona esi sizukulwana sesibini sidanile kwabaninzi. Yintoni eyenze abathengi bajonge iimveliso ezinje ngeSamsung kunye neXiaomi bekhangela ezinye iindlela.
Ke ngoko, kuya kufuneka silinde idatha entsha kwintengiso kwicandelo lee-headphone. Yintoni ecacileyo ngala manani kukuba uphawu lufana UXiaomi ukwazile ukwenza umngxunya kweli candelo. Ke baya kuphehlelela iimodeli ezintsha kuluhlu lwabo lwe-AirDots.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » I-Xiaomi yeyona nto ikhula ngokukhawuleza kwicandelo lee-headphone
Ungayibeka njani iwijethi kwiscreen sasekhaya kwi-Android